२ मिनेट भित्र कसरी नेटफ्लिक्स सदस्यता रद्द गर्ने? - कसरी
तपाइँको नेटफ्लिक्स सदस्यता रद्द गर्न चाहानुहुन्छ? जो अनिश्चित छन् वा यो कसरी गर्ने जान्दैनन्, यो गाइडले तपाईंलाई सबै ज्ञात विधिहरू सिकाउन मद्दत गर्दछ। त्यस्तै, यो एक समीक्षाको रूपमा काम गर्नेहरूलाई पहिले नै यी विधिहरू थाहा छ भनेर निश्चित गर्न यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि तपाईं प्रक्रिया सही तरीकाले अनुसरण गर्दै हुनुहुन्छ।
नेटफ्लिक्स कसरी रद्द गर्ने?
नेटफ्लिक्स यसको प्रीमियम सामग्री, सजिलो ईन्टरफेस, र सीधा सेवाहरूको लागि परिचित छ। जे होस्, कहिलेकाँही, तपाईं एक विश्राम लिन चाहानुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईं अन्य सेवाहरू प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, वा हुनसक्छ तपाईं परीक्षणमा सदस्यता रद्द गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको कारण जेसुकै होस्, हामी तपाईंलाई नेटफ्लिक्सको सदस्यता रद्द गर्न मद्दतको लागि चरण-देखि-चरण गाईडहरूको पूर्ण सूची ल्याउँदछौं।
प्रोफाइल मेटाउनु एक विकल्प हैन -
नेटफ्लिक्ससँग कस्टम प्रोफाइलहरू सिर्जना गर्न एक उत्तम विकल्प छ जुन तपाईंको साथीहरू वा परिवारसँग सेवा साझा गर्नका लागि हो। यसले सबैलाई तपाइँको विगतको स्ट्रिमि activities गतिविधिहरूको आधारमा सिफारिसहरूको साथ एक व्यक्तिगत अनुभव दिन अनुमति दिन्छ।
यद्यपि तपाईंको प्रोफाइल मेटाउँदा तपाईंको सदस्यता समाप्त हुँदैन। यदि तपाईंले सबै प्रोफाइल हटाउनु भयो भने पनि, तपाईं जहिले पनि नयाँ सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईं बिभिन्न प्रोफाइलहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ, नेटफ्लिक्सले तपाईंलाई चार्ज गर्दैन। त्यस्तै, बिलि cycle चक्र प्रोफाइल मेटाएर समाप्त हुँदैन।
अनुप्रयोग विस्थापित नगर्नुहोस् -
अर्को साधारण गल्ती मानिस उचित रद्द प्रोटोकलको अनुसरण नगरी अनुप्रयोगको स्थापना हटाउन प्रतिबद्ध गर्दछ। यदि तपाईं क्यास खाली गर्नुभयो, डाटा खाली गर्नुहोस्, र अनुप्रयोग विस्थापित गर्नुहोस्, यसले बिलि cycle चक्र रोक्ने छैन। बिलि cycle चक्र तपाइँको मनपर्ने भुक्तानी विकल्पसँग जोडिएको छ। यो क्रेडिट कार्ड, बैंक स्थानान्तरण, वा अरू केहि हुन सक्छ। तपाईंको अनुप्रयोग तपाईले सदस्यता लिनु भएका सेवाहरूको पहुँच प्रदान गर्न एक मध्यम मात्र हो।
परीक्षण प्रयोगकर्ताका लागि अनुस्मारक -
नेटफ्लिक्स एक प्रदान गर्दछ Everywhere०-दिन परीक्षण लगभग जताततै , संयुक्त राज्य अमेरिका बाहेक। यदि तपाईं एक परीक्षण संस्करण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सायद भुक्तान प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्नुभयो। एक पटक तपाईंको सदस्यता समाप्त भएपछि, नेटफ्लिक्सले यी विवरणहरू मार्फत सदस्यता नवीकरण गर्नेछ। यदि तपाईं चार्ज हुन चाहनुहुन्न वा सेवाहरू जारी राख्न चाहनुहुन्न भने, तपाईंले नेटफ्लिक्सलाई मैन्युअल्ली सदस्यता समाप्त गर्नुपर्नेछ।
एक पटक तपाईंको परीक्षण अवधि समाप्त हुन्छ, यसले तपाईंलाई कुनै प्रोम्ट प्रदान गर्दैन। यो सेवा जारी राख्न कुनै अनुमति लिने छैन। नेटफ्लिक्सले सेवाहरूलाई स्वचालित रूपमा नविकरण गर्नेछ। त्यसकारण, औंठाको सामान्य नियमको रूपमा, सदस्यता समाप्त हुनुभन्दा पहिले सधैं एक दिनको लागि एक रिमाइन्डर सेट गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई सदस्यता रद्द गर्न पर्याप्त समय प्रदान गर्दछ।
माथि दिइएका विकल्पहरूले यस प्रक्रियाको लागि काम गर्दैनन्। तपाईंले तल उल्लेखित उपलब्ध विधिहरूको साथ अनुसरण गर्नुपर्नेछ।
नेटफ्लिक्स रद्द गर्न उत्तम विधिहरू:
तपाईंले सदस्यताका लागि प्रयोग गरेको उही विकल्पमा तपाईंले सदस्यता रद्द गर्नुपर्नेछ। तसर्थ, त्यहाँ तीन साझा विधिहरू छन्:
वेबसाइट वा अनुप्रयोग मार्फत प्लेटफर्मबाट
आइट्यून्स मार्फत, यदि तपाईंले त्यहाँबाट खरीद गर्नुभयो भने
तेस्रो-पक्ष प्रदायकहरूले तपाईंलाई नेटफ्लिक्सलाई बोनसको रूपमा प्रस्ताव गर्छन्
यी प्रत्येक विधिका लागि तपाईंलाई पछ्याउनको लागि विशेष चरणहरू आवश्यक पर्दछ। यी प्रत्येकको लागि तल दिईएको विस्तृत मार्गदर्शन छ। आशा छ, तपाईं तिनीहरूलाई उपयोगी र बुझ्न सजीलो पाउनुहुनेछ। त्यसो भए थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं!
विधि १: आधिकारिक विधि (www.netflix.com)
यो विधि हो जुन तपाईं अनुप्रयोग वा वेबसाइटबाट नेटफ्लिक्स रद्द गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ।
भ्रमण गर्नुहोस् नेटफ्लिक्सको आधिकारिक वेबसाइट र लगईन गर्नुहोस्। यदि तपाईं अनुप्रयोग प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसलाई खोल्नुहोस् र कुनै प्रोफाइल चयन गर्नुहोस्
शीर्ष दायाँ कुनामा, एक तल्लो तीर हुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनुप्रयोगमा, यो तपाईको प्रोफाइलको आइकन हुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
यहाँबाट पाइलाहरू समान छन्। सूची खुल्नेछ। सूचीमा 'खाताहरू' फेला पार्नुहोस् र यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
अब तपाईं सदस्यता रद्द गर्न एक ठूलो बटनको साथ सदस्यता र बिलिंग विकल्प देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं अनुप्रयोग प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, नेटफ्लिक्स खाताहरूमा क्लिक गर्दा उही पृष्ठको साथ वेब ब्राउजर खोल्दछ।
'सदस्यता रद्द गर्नुहोस्' बटन क्लिक गर्नुहोस्। यसले तपाईलाई पुष्टिकरणको लागि सोध्न सक्छ।
Viola! प्रक्रिया पूरा भयो
यो आधिकारिक विधि हो जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले प्रत्यक्ष नेटफ्लिक्सको सदस्यता लिनुभयो।
विधि २: नेटफ्लिक्स DVD रद्द
हामी सबैलाई थाहा छ, नेटफ्लिक्स शुरूमा DVD भाडा सेवाको रूपमा शुरू भयो। यदि तपाईंसँग अझै यसको भाडाहरूको लागि सदस्यता छ भने, तपाईं माथिको-प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नुहुन्छ:
'सदस्यता र बिलि ’' कोटिबाट, तपाईं 'DVD सदस्यता रद्द गर्नुहोस्' फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र रद्द सुरूवात गर्न निश्चित गर्नुहोस्
यो त्यत्ति सजिलो छ! अब तपाइँ डिभिडिको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन।
विधि:: आईट्यून्सबाट रद्द गर्नुहोस्
यदि तपाईंले नेटफ्लिक्स प्राप्त गर्न एप्पलको आईट्यून्स प्रयोग गर्नुभयो भने प्रक्रिया र अनुप्रयोग थोरै परिवर्तन हुन्छ। एप्पल आईडीसँग नेटफ्लिक्स भएको उपकरण प्रयोग गर्न निश्चित गर्नुहोस्। यहाँ गाईड छ:
तपाईंको एप्पल उपकरण (आईफोन, आईप्याड, इत्यादि) को सेटिंग्समा जानुहोस्।
'आईट्यून्स र अनुप्रयोगहरू' फेला पार्नुहोस्, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस्
त्यहाँ तपाइँ तपाइँको एप्पल आईडी भेट्टाउनुहुनेछ, यसलाई हेर्नुहोस् र एप्पल आईडी हेर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्
एप्पल आईडीको सदस्यतामा जानुहोस्
पहिले नै उल्लेख गरिए अनुसार, निश्चित गर्नुहोस् कि यो उही एपल आईडी हो जुन तपाईंको नेटफ्लिक्स खातासँग सम्बन्धित छ
नेटफ्लिक्स सदस्यता लिने अनुप्रयोग र सेवाहरूको सूचीमा हुनेछ
यसमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईं त्यहाँबाट सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुन्छ
विधि:: तेस्रो-पार्टी विधि
तेस्रो पार्टी तपाईंको सेलुलर प्रदायक वा थोक र बोनस सेवा हुन सक्छ जुन तपाईंले नेटफ्लिक्सको लागि पाउनुभयो। यो यस सेवा प्रदायकमा निर्भर गर्दछ, र तपाईंले उनीहरूको ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ वा तिनीहरूको विकल्प अनुसरण गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक तेस्रो-पार्टी सेवा प्रदायकको पालना गर्न फरक विधि छ। तपाइँ सीधा आफ्नो नेटफ्लिक्स सदस्यता रद्द गर्न कार्यकारीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
नेटफ्लिक्स सदस्यता रद्द पछि कति लामो हुन्छ?
नेटफ्लिक्सले सदस्यता समाप्त गरेपछि तुरून्त काम गर्न रोक्ने छैन। यो अर्को बिलि cycle चक्र सम्म उपलब्ध हुनेछ। त्यसैले यदि तपाईंले बिलि cycle चक्रको सुरूमा नेटफ्लिक्स रद्द गर्नुभयो भने, तपाईं आफैंमा पूरै महिना हुनेछ।
नेटफ्लिक्सले फिर्ती प्रदान गर्दैन यदि तपाईं एक वार्षिक सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो र केही महिना पछि अप्ट-आउट गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने। जे होस्, यदि तपाईं आफ्नो योजना परिवर्तन गर्न र अधिक महँगो प्याकेज प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, नेटफ्लिक्सले तपाईंलाई भिन्नता पनि लिनेछ। सापेक्षिक रूपमा, यदि तपाईं सस्तो योजनामा ​​जानुहुन्छ, तपाईं फिर्ती प्राप्त गर्नुहुने छैन।
यी नियमहरू र सर्तहरू अन्तर्गत कडा नीतिहरू छन् तपाईंले नेटफ्लिक्सको सदस्यता लिनु अघि।
विश्वमा कुनै पनि सेवा प्रयोगकर्ताले नयाँ बिलि cycle चक्र सुरू हुनुभन्दा ठीक अघि सदस्यता समाप्त गर्नुपर्दछ। यद्यपि नेटफ्लिक्समा उदाहरणहरू छन् जहाँ तपाईं उनीहरूको टोलीलाई सम्पर्क गरेर फिर्ताको लागि सोध्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं बिलि ofको दिन सदस्यता रद्द गर्दै हुनुहुन्छ र नेटफ्लिक्सले अझै तपाईंलाई शुल्क लगाउँछ भने, तिनीहरूले फिर्ताको लागि आरम्भ गर्न सक्दछन्। यद्यपि तपाईको सास नराख्नु राम्रो हो। सँधै शीघ्र हुनुहोस् र कसरी नेटफ्लिक्स रद्द गर्ने माथिको दिइएका विधिहरू प्रयोग गर्नुहोस्। आशा छ, तपाईले केहि मूल्यवान् बनाउनु भयो जुन तपाईलाई मूल्य प्रदान गर्दछ।
नेटफ्लिक्स भारत स्ट्रीमफेस्ट
NordVPN Day० दिन नि: शुल्क परीक्षण
र colorमा जीवन अनलाइन हेर्नुहोस्
अनलाइन फिल्म हेर्नका लागि नि: शुल्क वेबसाइटहरू
त्यहाँ एक छात्र छूट को लागी छूट छ
नि: शुल्क थिएटरबाट फिल्महरू हेर्नुहोस्
यो राती भोडलकरमा आउँछ
पीसीमा क्रोमकास्ट कसरी पाउने
आईट्यून्स विन्डोज १० मा डाउनलोड भइरहेको छैन